मनोरञ्जन खबर – Page 15 – JanaSanchar.com
फिल्ममा साइन गर्नुपूर्व शर्त राख्ने बलिउडका कलाकारहरु
बलिउडका ठूला स्टारहरु हचुवामा कुनै पनि फिल्म साइन गर्दैनन् । ब्यानरदेखि स्क्रिप्टसम्म सबै कुरा चित्त बुझेपछि मात्र फिल्म खेल्न तयार हुन्छन् । यसका अतिरिक्त केही यस्ता कलाकार छन् जो हरेक फिल्ममा साइन गर्नुपूर्व पूर्वशर्त राख्छन् । यहाँ तीनै कलाकारको बारेमा चर्चा गरिएको छ । सलमान खानः कयौं सुपरहिट फिल्म दिइसकेका सलमान खानको हरेक..
दीपिका र रणवीरको ब्रेकअप !
के दीपिका पादुकोण र रणवीर सिंहबीचको प्रेम सम्वन्ध टुटेको हो ? बलिउडमा अचेल यस्तै लख काट्न थालिएको छ । हलिउड अभिनेता विन डिजलसँग दीपिका नजिकिएसँगै रणवीर उनीसँग रुष्ट भएको चर्चा केही समययता चल्दै आएको थियो । यही कारणले रणवीर र दीपिकाको ब्रेकअप नै हुन पुगेको चर्चा भारतीय मिडियामा गर्माएको छ । दीपिकाले आफ्नो पहिलो हलिउड फिल्म एक्सएक्सएक्स..
राप्रपा केन्द्रीय सदस्यमा राप्रपाको केन्द्रीय सदस्यमा बुद्धिमान तामाङलाई सर्वाधिक मतः कोमल ओली तेस्रो स्थानमा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशनले ९८ जना केन्द्रीय सदस्य चयन गरेको छ । बुधबार राति अबेर सकिएको मतगणनामा खुलातर्फको केन्द्रीय सदस्यमा बुद्धिमान तामाङले सर्वाधिक मत ल्याएका छन् । सँगै गायिका कोमल ओली लोकप्रिय तेस्रो मत प्राप्त गर्दै खुलातर्फ केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएकी छिन्। राप्रपाको खुलातर्फ केन्द्रीय सदस्यको..
रिलिजअगाडि कानूनी झमेलामा फस्यो रंगून
विशाल भारद्वाजले निर्देशन गरेको फिल्म रंगुन रिलीजभन्दा अगाडि नै कानूनी झमेलामा फसेको छ । समाचारअनुसार फिल्म प्रोडक्सन कम्पनी भाडिया मूभिटोन प्राइभेट लिमिटेडले कपिराइट उल्लंघन गरेको आरोपमा मुम्बई उच्च अदालतमा रंगूनका निर्माताहरुमाथि व्यवसायिक मुद्दा दायर गरेको छ । भाडिया मूभिटोन प्रालिका राय भाडियाले भने, ‘रंगूनमा कंगनाले..
आफ्नै ड्राइभरद्धारा चर्चित अभिनेत्री मलायालम शुक्रबार राति बलात्कृत
साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीकी चर्चित अभिनेत्रीलाई आफ्नै ड्राइभरले बलात्कार गरेको समाचार बाहिर आएको छ । शुक्रवार राति आडी भन्ने स्थानमा ती अभिनेत्रीको बलात्कृत भएको समाचारमा उल्लेख छ । अभिनेत्री मलायालम फिल्म इंडस्ट्रीमा चर्चित छिन् । उनले तेलगु, तमिल र कन्नड फिल्ममा पनि काम गरिसकेकी छिन् । अभिनेत्रीका ड्राइवर मार्टिन र सुनिल कुमार..
प्रियंकाले लेखिन्-‘मलाई लाग्छ, म गर्भवती भएँ’
नायिका प्रियंका कार्कीले आफू गर्भवती भएको भन्दै एक तस्बिर पोष्ट गरिन् । इन्स्ट्राग्राममा प्रियंकाले लेखेकी छिन्-‘मलाई लाग्छ म गर्भवती छु । यो बेबी डाइनोसर हो ।’ इन्स्ट्राग्राममा नायिकाले पोष्ट गरेको यो तस्बिरमा उनका फ्यानहरुले विभिन्न प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर, चलचित्र ‘बटरफ्लाई’को छायांकनमा रहेकी यी नायिकाले कपडा राखेरै आफू..
नीशाले गर्नेछिन् २ नायकसँग रोमान्स
चलचित्र ‘रंगीन’को घोषणा भएको छ । जेठबाट छायांकनमा जाने चलचित्रको घोषणा गर्दै निर्देशकको खोजी गरिएको छ । निर्देशक वाहेक अन्य सबै यूनिट तय भैसकेका छन् । एक कुशल निर्देेशकलाई निर्देशनमा अवसर दिने योजना यसको निर्माणपक्षको छ । अफस्ट्रयाक लभ स्टोरी कथामा बन्ने यो चलचित्रमा नायिका नीशा अधिकारी मुख्य भूमिकामा छिन् । उनको साथमा नवराज श्रेष्ठ र..
दयाहाङको ‘कान्छी’ नायिका स्वेता खड्का हुने
नायिका स्वेता खड्काले निर्माण गर्न लागेको चलचित्रका नाम तय गरिएको छ । चलचित्र ‘कोहिनुर’ पछि स्वेताले बनाउन लागेको चलचित्रको नाम ‘कान्छी’ राखिएको छ । कुनै पनि चलचित्र निर्माण भएको १० बर्षपछि सोहि नाममा नयाँ चलचित्र बनाउन पाउने प्रावधान छ । चलचित्रको शिर्ष भूमिका नायिका खड्का रहनेछिन् । उनीसँगै चलचित्रमा नायक दयाहाङ राइले अभिनय गर्ने..
राप्रपा प्रवेश गरेको एक महिना नहुदै कोमल वलीद्धारा राजिनामा
राप्रपा नेपालमा प्रवेश गरेको एक महिना नपुग्दै कोमल वलिले रेडियो नेपालबाट राजिनामा दिएकी छन् । रेडियो नेपालमा समाचारवाचनबाट चर्चित भएकी सञ्चारकर्मी तथा गायिका वलीले ‘फुल टाइम’ राजनीति गर्ने सोच लिएर बीस वर्षे जागिर छोडेको बताएकी छिन् । पछिल्लो समय कलाकारहरु राजनीतिक पार्टीमा प्रवेश गर्नेहरुको लहर चलिरहँदा उनी पनि राप्रपाका..
बंगाली नायिकाको शव आधा कुहिएको अवस्थामा आफ्नै फ्ल्याटबाट फेला
बंगाली नायिका बितास्ता शाहाको शव आधा कुहिएको अवस्थामा फेला परेको छ । मनोरञ्जन उद्योगमा छोटो समय काम गरेकी नायिका शाहाको शव बुधबार उनको कोलकातास्थित फ्ल्याटबाट पुलिसले बरामद गरेको हो ।आधा कुहिएको शरिर कोलकाताको दक्षिणी भागमा अवस्थित कास्बामा रहेको उनको फ्ल्याटमा झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेको हो । लगभग दुई दिनदेखि उनलाई गरिएको..